Mission Statement Shona - COVID and Mental Health
Chirongwa chepasirose “Mind the Gap”, chakatangwa icho kubva mumashoko ekuti “kumira kwekuyanana pakati pedu”. Asi kuvanhu vazhinji vane matambudziko ekukuvapakati pevamwe kana hurema, mashoko aya anoreva kuwedzerwa kwekusarurwa kwavo zvakanyanya.
Munguva iyi yedambudziko reCovid19, hutsanana hwekusaungana pedyo napedyo pakati pedu hongu hunofanira kuvapo, asi vanozonyanya kushupika zvichikonzerwa nedambudziko iri ndeavo vanoda rubatsiro ne yanano kubva kunavamwe, vaya vangorivoga, kana vanorwara zvikuru, kana vakakwegura vasina wavanaye pedyo, pamwe nevaya vanorwara nepfungwa vanova ivo vagara vachisvorwa nekusemewa zviripachena dzimwe dzenguva.
Kuvanhu ava, "kumira kwekuyanana pakati pedu" uku kunotoreva kuwedzerwa kwekusarurwa kwavo zvakanyanya. Saka tinoti isu HONGU kuhutsanana hwekusaungana nekugara zvakaparadzana pakati pedu, asi tinoti KWETE kukumiswa kwekuyanana pakati pedu.